Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Magaalada Stokholm |
Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Magaalada Stokholm
Qarax ballaaran ayaa xalay ka dhacay daar ku taala xaafadda Östermalm oo dhacda faras magaalaha Stockholm.
Mid ka mid ah gawaaridii waddada tiilay ayaa dhammaan ku burburey qaraxaasi.
Markhaati ku dhaqan goob hal kiiloomitir u jirta daarta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in qaraxu u dhawaaqay sidii madfac oo kale, isla markaana la dareemayay.
–Dhammaan daaqadihii qowladda jiifka iyo dhamman guriga ayaa buburey, meel walbana waxaa yaala burburkii dhalooyinka.
Ciidanka ammaanka ayaa sidoo kale sheegay in aanay jirin cid ku wax yeeloowday illaa hadda qaraxaasi.
– Qoska dhammaantii ayuu qaraxu hurdadii ka kiciyey, halka dhanka kale sawirradii debiyada surnaa ey dhulka ku soo daateen, sida uu sheegay markhaati deggena daar ka soo horjeedda daarta uu qaraxu ka dhacay.
Ciidanka ammaanka iyo gargaarka degdegga ah ayaa xiray goobta uu qaraxu ka dhacay, halkaasina ka abuuray goob laga hago howlaha iyo goob lagu ururiyo dadka deegaanka waxyeeloobey ku noolaa..
Qaar ka mid ah dadkii ku noolaa deegaanka ayaa si degdeg ah goobta looga kaxeeyey, sida uu sheegay ciidanka ammaanku.
– Maamulka magaalada Stockholm ayaa albaabbada u furey dugsiga Gärdesskolan oo nawaaxiga ka dhowaa, halkaasina oo la geeyey dqaar ka mid ah dadkii deggenaa goobta qaraxu ka dhacay sidii taageero loogu fidin lahaa ciddii u baahan, sida uu sheegay Mats Eriksson.
Weli lama hayo akhbaar la xiriirta sababta qaxaraxa ka dambeeysay iyo qaraxu inuu yahay mid kama’ u dhacay iyo mid ku talo gal ah, hase yeeshee uu ciidanka ammaanku furay dacwad la xiriirta halis gelin bulsho, sida ay sheegtay laanta idaacadda ee P4 Stockholm.